रेशमी बाटो, मखमलबाफ र किम काफल- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
‘म जन्मनुअघिदेखि नै थाकेको छु। मेरी आमाले मलाई आफ्नो गर्भमै पालेर मजदुरी गर्थिन्। म त्यो बेलादेखिकै मजदुर हुँ, म आफ्नो आमाको थकानलाई महसुस गर्न सक्छु,उनको थकान अझै पनि मेरो शरीरमा छ ।’
श्रावण १०, २०७७ अनुप बराल
छुट्टीको कुनै दिन
आधा बाटो पुगेपछि
एकअर्काको सामुन्नेबाट गुज्रियौँ
ऊ सहरतिर गइरहेको थियो
म चिहानतिर ।
(इरानी कवि सबिर हकाको कविता ‘मृत्यु’ बाट ।)
मलाई सम्झना छ— प्रख्यात जापनिज संगीतकार कितारोको ‘सिल्क रोड’ भन्ने सांगीतिक एल्बम सुनेपछि यो शब्दप्रतिको जिज्ञासा बढेको हो । ‘सिल्क रोड’ अर्थात् ‘रेशमी बाटो’ व्यापारी प्रयोजनका लागि दोस्रो शताब्दीदेखि अठारौं शताब्दीसम्म पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने नेटवर्क बनेको थियो । र, यी नेटवर्कभित्र पर्ने क्षेत्रहरू आर्थिक, संस्कृतिक, राजनीतिक र धार्मिक अन्तरक्रियाको केन्द्र बने । यो सभ्यता निर्माणको खेल यही रेशमी बाटोको अनुपम देन भन्न सकिन्छ । यसको एउटा छेउ जापान, कोरिया र चाइना बने, अर्को छेउ इरान । इरानसँगको मेरो कनेक्सन मानचित्रले भन्दा पनि रेशमी बाटोले कोरेको मार्गचित्रले बनाएको हो ।
‘सिनेमा एउटा प्रविधि हो । सिनेमा बन्दुकजस्तै हुन्छ । यद्यपि एउटा बन्दुकले एउटा व्यक्तिमाथि एकपटक मात्रै गोली दाग्न सक्छ । तर, सिनेमाले एक सेकेन्डमा २४ वटा फ्रेमको दरले अज्ञानताको बारेमा बोल्न सक्छ । मेरा लागि सिनेमा कला, समाज र हरेक मानिसका लागि एउटा रचना र जिम्मेदारी हो ।’ –मोहेसिन मखमलबाफ ।
लगभग एग्जाइल जीवन बाँचिरहेका इरानी फिल्ममेकरको भनाइ हो यो । यसभित्र केही प्रतिबद्धता र त्यसको आकर्षण लुकेको छ । उनको यो अवधारणामाथि तपाईं असहमति राख्न सक्नुहुन्छ होला । तर, उनका सिनेमाले विश्व सिनेमाको परिदृश्यमा बनाएको दह्रो उपस्थितिलाई नकार्न सक्नुहुन्न ।
सन् १९९७ तिर पुने फिल्म इन्स्टिच्युटमा फिल्म एप्रिसिएसनको कोर्स गर्दै गर्दा केही साथीहरू यस्ता भेटिए, जो इरानी साहित्य र सिनेमामा रुचि राख्थे । यिनैको सान्निध्यमा मैले फिल्मकार मोहेसिन मखमलबाफबारे जान्ने–बुझ्ने मौका पाएँ । मखमलबाफ नब्बेको दशकमा इरानी न्यु वेभ सिनेमाको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वको रूपमा देखिएका हुन् । उनले बनाएका ‘सलाम सिनेमा’ (१९९४) र ‘अ मुमेन्ट अफ इनोसेन्स’ (१९९६) जस्ता फिल्मले उनलाई सिनेमेकरको रूपमा एउटा उचाइमा पुर्‍याइदियो । यिनका फिल्मका–विषयले यथार्थ र काल्पनिक कुरालाई साझा गर्छन् अनि वृत्तचित्र र फिचर फिल्मबीच हुने विभाजन रेखालाई मेटाइदिन्छन् ।
‘मोमेन्ट अफ इनोसेन्स’, मखमलबाफको जटिल कथा हो । यो सिनेमामा रोचक प्रयोग छ । दुई दशकअघि एउटा विरोध र्‍यालीमा मखमलबाफ छुरी प्रहार गरेको एक जना पुलिसकर्मीलाई आफैँ ट्र्याक गर्छन्, उसलाई भेट्छन् । दुवै जना यही विषयमाथि सिनेमा बनाउने सहमतिमा पुग्छन् । उनीहरू ती पुराना दिनका सबै घटनालाई पुनर्रचना गर्छन्, आफ्नो योङ भर्सनका लागि कास्टिङ पनि गर्छन् र तिनलाई अभिनय कसरी गर्ने सिकाउँछन् पनि । यो प्रक्रियामा पात्रहरूले बाँच्ने अन्तरविरोधमाथि फिल्म बनेको छ । प्रेम र त्यसको क्षय, युवा र वृद्धावस्था, विम्ब र स्मृतिको तालमेल छ यहाँ, जसले वर्तमान र भूतकालमा यात्रा गरिरहन्छ । यसमा मेटा सिनेमा हेर्नुको मजा छ ।
मखमलबाफले किरोस्तामीको निर्देशनमा बनेको सिनेमा ‘क्लोज अप’ खेलेका पनि छन् । यो सिनेमामा मखमलबाफ स्वयं आफ्नै चरित्रमा खेलेका थिए । यो सिनेमाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के थियो भने यसमा अभिनय गर्ने हरेक पात्र आफू स्वयं नै हुन् । मोहेसिन मखमलबाफलाई यो फिल्ममा यसकारण पनि सम्झिरहिन्छ कि यो फिल्मको मुख्य पात्र, जो एउटा कैदी हो, ऊ आफूलाई फिल्मकार मखमलबाफ हुँ भन्छ र त्यस्तै किसिमको रूप धारण गर्छ । उनको जस्तै आचरण गर्छ । जजको अगाडि पनि त्यसरी नै प्रस्तुत हुन्छ । जीवन परीक्षण र नैतिक संकटको अनौठो कहानी भन्ने तरिका र प्रयोगको कारण यो सिनेमालाई धेरै समीक्षकले संसारको एउटा मास्टरपिस सिनेमा मान्छन् ।
यसमा कुनै शंका छैन कि नाटक, सिनेमा, साहित्य र कलाजस्ता संसाधनहरूले कुनै पनि भूगोलको संस्कृति बुझ्न अनेकौं ढोका उघारिदिन्छन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू र उनीहरूको दैनिकी जीवन जान्नका लागि कलात्मक दृष्टिकोण प्रदान गर्छन् । इरानी फिल्महरू हेर्दै जाने क्रममा जफर पनाही, समिरा मखमलबाफ, असगर फरहादी, मजिद माजिदी, तहमिने मिलानी र बाहमन गोभाडीजस्ता फिल्ममेकरका काम गज्जब लागे । यिनले इरानजस्तो देशप्रति आम रूपमा देखाइने अवास्तविक छविभन्दा समाजको गहिरा सूक्ष्मता, नैतिक मूल्यहरू र मानिसका जीवन भोगाइबारे बुझ्न अधिक सघाएका छन् । कथा भन्ने शैलीमा सरलता र मिनिमलिस्तिक अप्रोच इरानी फिल्मका सौन्दर्य हुन् । यसैले यिनको बेग्लै पहिचान बनाएको छ ।
सिनेमाको फ्रेममा जीवनका स–साना कुरालाई रुचिपूर्ण तरिकाले चित्रण गर्ने अनि त्यसमा एक किसिमको सुफियाना र कलात्मक अनुभव जोड्ने इरानी फिल्मको शैली आफैँमा एउटा बृहत् विद्यालय हो । हावा, पानी, माटो, सुगन्धसँग जोडिएका रुटेड कथाहरूलाई यिनीहरू एउटा काव्यात्मक लयमा प्रस्तुत गर्छन् । यी सिनेमाहरूमा एउटा राम्रो चित्र हेर्नॅ र मिठो कविता पढ्नुको आनन्द भेट्न सकिन्छ । सानो बजेटमा पनि सानदार एवं आत्मीय सिनेमा बनाउन सक्नु इरानी सिनेमेकर्सहरूको ठूलो सामर्थ्य र शक्ति हो । हाम्रोजस्तो सानो फिल्म उद्योग भएको मुलुकका निम्ति इरानी फिल्मको यो शिल्प पक्ष प्रेरक तत्त्व बन्न सक्छ ।
कुनै समय मोहेसिन मखमलबाफले लेखेको एउटा कथा (जुन एक कैदीले लेखेको चिठीमा आधारित थियो), इरानी सिनेमा र साहित्यले मप्रति बनाएको आकर्षण अब्बास किरोस्तामीको ‘क्लोज अप’ र ‘टेस्ट अफ चेरी’ हुँदै अहिले सबिर हकाले लेखेको कवितासम्म आइपुगेको छ । यसो हुनु अकारण थिएन । कुनै समय कविता लेख्ने प्रयास गर्थें । आजभोलि राम्रो कविता पढ्ने कोसिस गर्छॅ । संसारभरिका कविता सम्भव भएसम्म पढौं भन्ने लाग्छ । यसै क्रममा इरानी कवि सबिर हकाका केही कविताले –अनूदित कविता) मलाई आकर्षित गरेका हुन् । विशेषता कविताको सरल प्रस्तुति र त्यसले पाठकको मनमा बनाउने जबर्दस्त दृश्यात्मक अनुभवले गर्दा । भनिन्छ, आफूलाई मन परेको कविता पढ्नुको सुख अरूबीच बाँड्दा त्यो सुख अझै बढ्दै जान्छ । यसैले जानीनजानी सबिर हकाका तीनवटा कवितालाई अनुवाद गर्न पुगेछु ।
सबिर हकाले धेरै लेखेका छैनन् । तर, जति लेखेका छन् ती यति मर्मस्पर्शी छन् कि तिनले पाठकको मनमा अतिरिक्त समवेदनाका घर बनाउँछन् र उनीहरूको मस्तिष्कलाई सोच्नका लागि विवश पार्छन् । सन् २०१५ यता सोसल मिडियाको एउटा खास वर्गमा सबिर आफ्नो कविता–लेखन र जीवनशैलीका कारण पनि चर्चामा रहे ।
सबिरको जन्म सन् १९८६ मा इरानको करमानशाहमा भएको हो । आजकाल उनी तेहरानमा बस्छन् र भवन निर्माण कार्यमा मजदुरी पनि गर्छन् । उनी कविता लेख्नका लागि मजदुरी गर्छन् । कविता प्रतियोगितामा प्रथम भएर उनले पुरस्कार पनि ग्रहण गरेका छन् । तर, उनलाई थाहा छ— पुरस्कार र कविताले उनको पेटको भोक मेट्दैन । पैसा कमाउन ढुंगा र गिट्टी पनि बोक्नुपर्छ ।
उनले आफ्नो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘म जन्मनुअघिदेखि नै थाकेको छु । मेरी आमाले मलाई आफ्नो गर्भमै पालेर मजदुरी गर्थिन् । म त्यो बेलादेखिकै मजदुर हुँ, म आफ्नो आमाको थकानलाई महसुस गर्न सक्छु, उनको थकान अझै पनि मेरो शरीरमा छ ।’
सबिरको अनुभव बोल्छ— तेहरानमा उनीसँग सुत्नका लागि पनि ठाउँ छैन । आज पनि कैयौं रातहरू सडकमा घुम्दै बिताइरहेका छन् । यही भएर गएको १२ वर्षदेखि उनी आफ्नो उपन्यास पूरा गर्न सकुँला भनेर विश्वस्त हुन् सकिरहेका छैनन् । इरानमा धेरै राम्रा कुराको बाबजुद सेन्सरसिप पनि छ । फिल्मकार, साहित्यकार, रंगमञ्चका कामहरूमा र महिला स्वतन्त्रताका कुरामा डिलिट भन्ने डिभाइसिज राम्रोसँगै चल्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हुने केही घटनाले बेलाबेलामा भनेका छन् । यद्यपि एक सर्जकका लागि आफूले भोगेको ल्यान्डस्केप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले उसको संवेदनालाई बुन्छ, सजाउँछ, उधार्छ र फेरि बनाउन प्रेरित गर्छ । इरानमा हुने यी राजनीतिक, सामाजिक अप्ठेराका बाबजुद सर्जकहरू आफ्नो सृजन कार्यमा निरन्तर बनिरहेकै छन् ।
सबिर हकाका कविता
१. किम काफल
के तिमीले किम काफल
देखेका छौ ?
त्यो जहाँ खस्तछ
त्यति नै माटोमा
त्यसको रक्तिम रसको दाग बस्दछ
खस्नुजस्तो पीडादायी केही हुँदैन
मैले थुप्रै मजदुरहरुलाई देखेको छु
अग्ला भवनबाट खसेका
र, किम काफल बनेका ।
२. मेरो एक मात्र डर
जब म मर्नेछु
आफ्ना सारा प्रिय किताबहरुलाई
आफूसँगै लिएर जानेछु,
आफूले माया गरेकाहरुको तस्बिरहरुले
आफ्नो चिहानलाई भर्नेछु ।
मेरो नयाँ घरमा
भविष्यका कुनै भयका निम्ति
कुनै ठाउँ हुने छैन ।
र, ती सारा स्त्रीहरुलाई सम्झेर रूनेछु
जसलाई म अँगालो हाल्न चाहन्थेँ ।
यी सारा आनन्दहरुका बीच
एउटा डर भने रहिरहनेछ
कि कुनै दिन सखारै
कसैले मेरो काँध झक्झक्याउँदै
मलाई जगाउनेछ र भन्नेछ,
‘ए सबिर, उठ । काममा जाने बेला भयो ।’
म ईश्वरको साथी होइन
केवल एउटै कारणले
जसका जराहरु धेरै पुरानो अतीतमा छन्
जुन बेला ६ जनाको हाम्रो परिवार
एउटा साँघुरो कोठमा बस्ने गर्थे
ईश्वरसँग एकदम ठूलो घर थियो
र, उनी त्यहाँ एक्लै बस्ने गर्थे ।
बन्दुक आविष्कार नगरेको भए
कम मानिसहरु मारिने थिए ।
कैयौं कुराहरु सहज हुने थिए
र, तिनलाई मजदुरहरुको शक्ति
महसुस गराउन सहज हुने थियो ।
(सबिरका यी कविता ‘मोर्डन पोएट्री इन ट्रान्सलेसन’ भन्ने एउटा चर्चित साहित्यिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो । यो अनुवाद फारसीबाट अंग्रेजीमा नसरिन परवाज र ह्युबर्ट मुरद्वारा गरिएको अनुवादमा आधारित छ । अंग्रेजीमा अनुवाद गर्ने अनुवादकद्वय र नेपालीमा मैले गरेको भावानुवादमाथि अमूल्य सुझाव र सल्लाह दिने कविवर विप्लव प्रतीकप्रति हार्दिक नमन । – अनुप बराल) प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ १३:०३
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ १३:२४